Experience of Teaching Life | Love Joshi
Category Archives: Experience of Teaching Life
( १६४ ) एकै घाटमा दुई शेरले संगै पानी पिउँदैनन् ।
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु
२०७२ भाद्र २१ गते सोमवार
घंटी लागेपछि चक, डष्टर र किताब लिएर अफिस गएं । टेबुलमाथि राखें । बाहिर गएं । बाहिर अवलोकनकर्ताहरु बसिरहेका थिए । एक जनाले भने, ” सर, १८ / २० वर्ष शिक्षण गरेका शिक्षकको पूरै कक्षा अवलोकन गर्नु आवश्यक ठानेनौं, हामीले । अरु प्रतियोगीहरु पनि छन् । एक हप्तापछि रिजल्ट दिने छौं, धन्यवाद ” , एक मोटो ,रौं सेतो देखिने, चाक्लो अनुहार भएका ब्यक्तिले भने ।” सबैलाई ” नमस्कार ” गरी म सिनामंगल चौकतिर लागें । केही किनमेल गर्दै थिएं ।त्यसैबेला कक्षा शिक्षणपछि बोल्ने ब्यक्ति भेट भए । उनले आफूलाई विसंसको अध्यक्ष भएको परिचय दिए । हात मिलाए ।
” मेरो एउटा प्रस्ताव छ । अर्का एक जना योग्य मित्र पनि हुनु हुन्छ । विद्यालय दुई शिफ्ट संचालन हुन्छ । तपाई भिजिटिंग टिचर भएर दिउँसोको शिफ्टको प्र. अ. भई संचालन गर्नुस् । निजले विहानको मा.वि. शिफ्ट संचालन गर्छन् । मिलेर काम गरौं ।”
” सर, यो भिजिटिंग टिचर भन्ने विद्यालय स्तरमा प्रचलित छैन । विश्वविद्यालयमा भिजिटिंग प्रोफेसर हुन्छ । एक विद्यालयमा दुई प्रअ रहनु भनेको विवादास्पद विषय हो । एकै घाटमा दुई शेरले संगै पानी पिउँदैनन् ।”
खिस्स हाँसेर “सी यू” भन्दै बाइक कुदाउंदै गए, अध्यक्ष । ( क्रमश:..)
( १६३ ) त्यतिकैमा अवलोकनकर्ताहरु ह्वारह्वारती कक्षाबाट बाहिरिए । मेरो शान्त कक्षा बिथोलियो ।
२०७२ भाद्र २० गते आइतवार
अन्तर्वार्ता सहजै सम्पन्न भयो । विद्यालय संचालनमा दिनहुं आउने समस्याहरुबारे तार्किक ढंगले प्रस्तुत हुनु मेरोनिम्ति नौलो कुरा थिएन । अन्तर्वार्ता बोर्डलाई चित्त बुझ्यौ रै’छ । दोस्रो चरणको परीक्षा – कक्षा शिक्षणकोलादि छनौट भएको खबर भोलि पल्ट पाएँ । निर्धारित समयमा पुगें । ११ बजेको समय थियो- दोस्रो पिरियड । कक्षा ९ मा अंग्रेजी विषयमा रहेको “Fables of Aesop”पाठ पढाउने निर्देश भयो । केही अवलोकनकर्ता कक्षा पछाडि बस्न गए, केही अगाडिको बेन्चमा विद्यार्थीसंगै बसे । अंग्रेजीमा अभिवादन गरे लगत्तै पाठ पढाउन थालें । कक्षा शान्त र नियन्त्रित थियो । पहिलो पंक्ति पढाइ विद्यार्थीहरुसंग प्रश्नोत्तर शुरु गरें । त्यतिकैमा अवलोकनकर्ताहरु ह्वारह्वारती कक्षाबाट बाहिरिए । मेरो शान्त कक्षा बिथोलियो । नरमाइलो लाग्यो ।पाँचै मिनटमा मेरो मूल्याँकन गरे छन् भन्ने लाग्यो । शिक्षणको sequence ( सिलसिलेवार ) नै नहेरी गए, अवलोकनकर्ताहरु । मैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु थियो । पूरै समय पढ़ाएँ । कक्षा कार्य समेत दिएँ । ( क्रमश:….)
( १६० ) समस्याग्रस्त शिक्षकलाई कसरी तह लगाउने ?
२०७२ साल भाद्र १६ गते बुधवार
२०४७ साल चैत । गुह्येश्वरी मा.वि. सिनामंगले गोरखापत्रमा “प्रधानाध्यापकको आवश्यक्ता”को विज्ञापन प्रकाशित गर्यो । मैले बुटवलबाट दरखास्त रजिष्ट्री गरी पठाएको थिएं । सम्पर्क मितिमा उपस्थिति भएं ।छनौट प्रक्रिया अन्तर्वार्ता र कक्षा शिक्षण राखिएको ज्ञात भयो ।
अन्तर्वार्ताको दिन भएको प्रश्नोत्तर –
प्रश्नकर्ता १- किन काठमाडौंमा प्र.अ. हुंन चाहनु भएको ? “पीएचडि गर्ने प्लेट फर्म पाउने अाशाले ।”
यो पद अस्थायी नि ? ” म स्थायी प्रअ हुँ । सरुवा गरेर आउँछु ।”
प्रश्नकर्ता २- समस्याग्रस्त शिक्षकलाई कसरी तह लगाउने ?
” शिक्षक कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक र प्रशासनिक तौरतरिकाले तह लगाउन सकिन्छ । प्रथमत: निजलाई उस्ले गरेको गल्ती, लापरवाहीको नतिजाले विद्यालयलाई असर पारेको उदाहरण दिई सुध्रन समय सीमा तोक्ने । अनुगमन जारी राख्ने । आवश्यक परे दोस्रो पटक लिखित स्पष्टीकरण सोधी सचेत गराउने । सुधार नआए, अटेर गरे ,निजलाई नै बदल्ने अर्थात बर्खास्त गर्ने गरी संचालक समितिमा निर्णय लिने ।” ( क्रमश:)
( १६१ ) स्तरीय पढाइले विद्यालयको आर्थिक स्तरमा सुधार हुन्छ ।
प्रश्नकर्ता ३- ” विद्यालयको आर्थिक स्थिति कसरी सुदृढ पार्न सकिन्छ ?”
” Quality education ( गुणात्मक शिक्षा ), योग्य,अनुभवी,तालिम प्राप्त अध्ययनशील र परिश्रमी शिक्षकहरुको “Team Work”। त्यो टीमलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने विद्यालय संचालक समिति ।यो अवस्थामा स्तरीय पठनपाठन हुन्छ । यस्तो पढाइ हुंने विद्यालयमा हुनेखानेहरुले आफ्ना सन्तति भर्ना गर्न ल्याउँछन् ।हुंदा खानेहरुले पनि गाँस काटेर नानीहरु भर्ना गर्न ल्याउँछन् । केही शल्क बृद्धि गरे पनि खुसीराजीले तिर्छन्, अभिभावकहरु ।”
प्रश्नकर्ता ४- अन्य केही उपाय पनि छन् कि, सर ?
” छन्, हजुर । विद्यालयको सडक मोहडामा जग्गा, ज़मीन भए कवाल / पसल / सटर निर्माण गरी भाडामा लगाउने । यसबाट स्थायी आमदानी भई रहन्छ । स्थानीय सरकार – नगर पालिका / जिल्ला विकास समिति / NGO / INGO संग आवधिक योजना देखाइ अनुदान माग गर्न प्रक्रिया चलाउने ।स्थानीय दाताहरुसंग अनुरोध गर्ने । भागवत महापुराणको आयोजना गरी दान संकलन गर्ने । संकलित रकम पूर्ण सदुपयोग गर्न सकियो भने नपुग रकम समेत माग गर्न मिल्छ ।” ( क्रमश: )…
(१५९ ) हुह्येश्वरी मा.वि.मा आगो बले जस्तै थियो,२०४७ / २०४८ मा
२०७२ साल भाद्र १५ गते मंगलवार
२०४६ / २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्वहालीकोलागि देशै भरि आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो ।नेताहरुले विद्यार्थी र शिक्षकहरुलाई पनि परिचालन गरेको थियो । शिक्षकले ढुंगा हान्थे । विद्यार्थीलाई पनि हान्न लगाउँथे ।
शिक्षक-विद्यार्थीहरु दुबै प्रजातन्त्रका संवाहक थिए । केही अन्तराल पछि त्यो परिदृश्य विद्यालयहरुको कक्षा कोठामा पनि देखियो । सा-सानो कुरामा विद्यार्थीहरु शिक्षकहरुसंग कडा प्रतिवाद गर्दै भनाभन र पाखुरा सुर्का सुर्कि समेत हुन्थ्यो । यो अवस्थाबाट गुह्येश्वरी पनि अलग थिएन । २०४७ चैतमा म प्र.अ.मा छानिंदा मेरा सामु यस्तै चुनौतिहरु सामना गर्नु पर्ने थियो। यत्ति मात्रले कहाँ पुग्थ्यो र ? त्यहाँ शिक्षक र संचालक समिति वीच तनाव थियो । संचालक समितिका सदस्यहरु वीच पनि वैमनस्यता थियो । शिक्षा प्रशासन कार्यालयहरु पनि विद्यालय प्रति विश्वस्त थिएनन् ।अभिभावकहरुको विद्यालय प्रति दरिलो विश्वास एवं सहयोग थिएन । यी सबै परिस्थिति सम्हालेर विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने दायित्व वहन गर्नु थियो । ( क्रमश: )
( १५६ ) रोडा र सीमेन्ट गायब भयो । ट्र्क चालकलाई कारबाई गरेर असुल गरियो ।
(१५६ ) रोडा र सीमेन्ट गायब भयो । ट्र्क चालकलाई कारबाई गरेर असुल गरियो ।
२०७२ भाद्र १२ गते शनिवार
संचालक समितिका २ / ३ जना सदस्यहरु ढोंगी, झुट्ठा र डबल स्टेण्डर्ड थिए । एक जनालाई गोदावरी मार्वल इडष्ट्रिजका बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेर चिनाइयो । तर उनी एक सरकारी स्वामित्वमा संचालित संचार गृहका सामान्य कर्मचारी रहेछन् । उनी तार्किक र बौद्धिक पनि थिए ।तर उनी दबावमा काम गर्ने प्रकृतिको थिए । एक पटक कंपनीले ३ /४ ट्रक रोडा विद्यालय हातामा नखसाली अन्यत्र डेलिभरी दियो । पछि चलानी स्टक चेक गर्दा सत्य फेला पर्यो । कंपनीले उक्त रोडा शोध भर्ना गर्यो । आफूलाई तथाकथित डायरेक्टर भनेर चिनारी गराउने निज महानुभाव भने रोडा असुली कार्यवाहीमा हामीलाई कहिल्यै साथ दिएनन् ।
चोभारको हिमाल सीमेन्ट कारखानामा अग्रिम बुकिंग गरिएको थियो । विद्यालयले औपचारिक अर्डर नै नगरेको अवस्थामा २०० बोरा सीमेन्ट चलान भएर गयो । केही समय पछि विद्यालयलाई सीमेन्ट आवश्यक भै लिन जाँदा कारखानाका कर्मचारीहरु आ-आपसमा मुखामुख गरी ” हामीले शंका गरेझैं भयो” भनी भन्न थाले । सीमेन्ट ओसारिएको ट्रक एक जना राणा थर भएका ब्यक्तिको भएको पत्ता लाग्यो । कोटेश्वर प्रहरी चौकीमा उजुरी गरेपछि उनले एक सातामा शोधभर्ना गर्ने कागज गरी दिए । निजले भाका भन्दा पहिले नै शोधभर्ना गरे । सीमेन्ट गायब गर्नमा एक जना महिला शिक्षक, एकाउन्टेन्ट र एक जना सदस्यको मिलिभगत भएको तथ्य पत्ता लाग्यो । एकाउन्टेन्ट र निज शिक्षकसंग स्पष्टीकरण सोध्ने कार्यवाही गरियो । सीमेन्ट र पहिलेको रोडा एकै ठाउँमा खसालिएको रहेछ । विद्यालयको निर्माण सामग्रीमा गिद्धे दृष्टि राख्नेदेखि सतर्क रही काम गर्दै गएं ।मेरो विरोधीको संख्या थपिंदै गयो । निर्माण कार्यमा बाधाबिरोध चुलिंदै गयो ।सकारात्मक सहयोग दिने खेमाको साथ लिंदै चुनौति स्वीकार गर्दै अघि बढ्दै गएं । ( क्रमश: )
(१५५) सुन जस्तो सालको काठ साटेर लाभ लिन खोज्ने जिल्ल पर्यो ।
२०७२ भाद्र ११ गते शुक्रवार
२०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको सरकार बन्यो । गुह्येश्वरी माविलाई २०० क्युविक फिट काठ निकासा दिने निर्णय भयो । टिम्बर कर्पोरेसन ललितपुरबाट काठ निकासा भयो । स्थानीय एक मिलमा चिरान गरियो । त्यो काठ जस्तै लाग्दैन थियो । त्यो सुन चिराएको जस्तो भान पर्थ्यो । वि. सं. स. संरक्षक समेतको रोहबरमा विद्यालयमा ढुवानी गर्ने क्रममा एक जनाले -याल चुहाउँदै प्रस्ताव राखे ,”यो काठ दामी छ , यस्लाई मिलमा साटेर अर्को लैजाऔं । हामीलाई दुख गरेको केही चाहिन्छ ।” एकले अर्काको मुख हेर्यौं । संरक्षकले भने, ” निकृष्ट ।” लाभ लिन खोज्ने जिल्ल पर्यो । मुख कालो भयो ।
बाँकी भएका काठ चिरान गरी विद्यालय ल्याउन मिलमा दुई जना, बाटोमा दुई जना र ट्रकमा पनि दुई जनाले पहरा दिंदै चार दिन लगाएर काठ सही सलामत विद्यालयमा ओसार्यौं ।त्यो काठमा घपला गर्ने इच्छा राख्ने सदस्य हामीलाई सघाउन आएनन् ।( क्रमश:…)
(१५४ ) विद्यालय निर्माणमा लोभी पापीहरु परास्त भए
( शिक्षण जीवनका अनुभवहरु )
२०७२ भाद्र १० गते विहिवार
सन्दर्भ २०४७ चैत देखि २०५० मंसीर सम्मको हो । काठमाण्डौंको सिनामंगल स्थित गुह्येश्वरी माध्यमिक विद्यालयको प्र.अ.मा कार्यरत थिएं ।हवाई विभागले अधिकरण गरेको विद्यालयको ठाउँमा नयाँ भवन बनाइ विद्यालय सार्नु थियो ।विद्यालयमा संचालक समिति थियो । तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि आफूलाई नेपाली काँग्रेस भन्ने स्व-मनोनित / स्व-घोषित अध्यक्ष र उनका पकेटका २ सदस्यले स्वैच्छिक निर्णय गराउन खोज्थे । पूर्व पंचहरु र नेकपा ( एमाले ) पनि थिए । अध्यक्ष र उनका पिछलग्गूहरु नाम मात्रको विद्यालय बनाइ लाभ लिने अपेक्षा राख्थे । ठेकेदार चयन,रोडा ,ढुंगा,सीमेन्ट,काठ डण्डी आदि निर्माण सामग्री खरिद जस्ता प्रकरणमा अनेक प्रकारले प्रभावित पार्न खोज्थे । पंचहरुको समूह मुआब्जा रकम शतप्रतिशत सदुपयोग हुनु पर्ने भनी खबरदारी गर्थे । वापन्थी खेमाकाहरु असल काम भए मात्र समर्थन रहने भन्थे ।समितिका सदस्यहरुको परीक्षण गर्नै मलाई ६ महिना लाग्यो । “सुन तौलनु बारम्बार मान्छे तौलनु एक बार ।” भन्ने उखान अनुसार साँच्चिकै विद्यालय निर्माण गर्ने मानसिकता राख्ने खेमाको पक्ष लिएँ, मैले । ( क्रमश: …)
(१४६) सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुले समेत आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरी पढाउनु पर्ने ।
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १४६ )
२०७२ भाद्र २ गते बुधवार
सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुले समेत आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरी पढाउनु पर्ने ।
भारतको इलाहाबाद उच्च न्यालयले हिजो भाद्र १ गते उत्तर प्रदेशको सबै सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई सरकारी प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु पर्ने आदेश दिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । सरकारका मुख्य सचिवको नाममा यो आदेश दिंदै अदालतें ६ महिना भित्रै प्रबन्ध मिलाइ आगामी शैक्षिक सत्रदेखि निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । सरकारी विद्यालयहरुको गिर्दो अवस्था देखेर यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ । हुने खानेका सन्तानहरु पढ्न थालेपछि सरकारी विद्यालयको भौतिक र आर्थिक स्थितिमा सुधार आउने विश्वास लिइएको छ ।
हाम्रो नेपालको हालतमा यो निर्णय बलियो नजीर हुंने देखिन्छ । हामी कहाँ पनि प्राथमिक विद्यालयहरुको अवस्था दयनीय छ । त्यसमा पनि वैशाख १२ र २९ को महाभूकम्पले धेरै विद्यालय ध्वस्त पारेको छ । दयनीय छन्, हाम्रा प्राथमिक विद्यालयहरु । हाकिम सर्कलका कर्मचारीका सन्तानहरु भर्ना गर्ने चलन छैन । महंगा निजी स्कूलमा पढ्छन् ,उनीहरुका सन्ततिहरु । सके विदेश पढ्न पढाइन्छ । शिक्षकहरु पनि आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दैनन् । अपवादको रुपमा भने कसै कसैले आफ्ना सन्ततिलाई बोर्डिंगबाट छुटाएर आफूले पढाउने विद्यालयमा भर्ना गरेको उदाहरण पनि पाइन्छ । जस्तै पशुपति मित्र मा. वि. चावहिलका अंग्रेजी शिक्षक चन्द्र कान्त पंडितले आफ्ना तीन जना नानीहरुलाई आफूले पढाउने विद्यालयमा भर्ना गरेका छन् । नत्र भने विद्यालयको पालेहरुले पनि आफ्ना नानीहरु महंगा बोर्डिंगमा मात्र भर्ना गर्दछन् । सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरुले समेत आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरी पढाउनु पर्ने नियम बनाइ लागू गर्नु पर्दछ ।कमजोर विद्यालयहरु सशक्त हुने छन् ।